China Air Deodorizer Ukwakha kanye Factory | FIZA
I-Air Mender PORTABLE
BUYA I-BACTERIA NE-VIRUS QEDA UKUQHUBEKA KANYE NEZINHLE EZINGAHLE
Umphumela walo mkhiqizo uvivinywa esikhaleni esivaliwe, umphumela wangempela mhlawumbe uhlukile ngokuya ngesikhala lapho uwusebenzisa khona.
Umkhiqizo wethu awukwazi ukubulala wonke amagciwane asendlini kanye namagciwane.
-Kuye ngesimo somoya nemvelo yomuntu siqu, umphumela walo mkhiqizo kungenzeka uhluke.
Khipha lo mkhiqizo esikhwameni sangaphandle bese udwengula uphawu olufakwe esikhwameni sangaphakathi se-aluminium
Imvamisa inyanga engu-1
Ama-Pls afunda ngokucophelela izixwayiso ngaphambi kokusetshenziswa futhi akugcine kahle
- Sicela ugcine lo mkhiqizo kufinyeleleke ezinganeni nasezifuyweni.
- Lo mkhiqizo awudleki, uma usugwinyiwe, uphuza amanzi amaningi uphinde ukhafule okuqukethwe kuwo. Uma uthinta isikhumba noma amehlo, hlambulula ngamanzi amaningi agelezayo. Uma kusenezinye izimo ezingajwayelekile, sicela ubonane nodokotela.
- Uma usebenzisa endlini, uma iphunga linamandla kakhulu noma lidala imizwa engakhululeki, sicela uyeke ukulisebenzisa ngokushesha futhi ufake umoya ekamelweni.
- Sicela ungavumeli umkhiqizo ngqo uthintane nesikhumba sakho.
-Uma uzivocavoca ulala, ama-pls awasebenzisi.
- Ungawusebenzisi lo mkhiqizo ukwenza okunye ukusetshenziswa.
- Lo mkhiqizo unomphumela othile we-bleaching. Uma usebenzisa, sicela uvumele uhlangothi olunembobo yomoya kude nezimpahla zokugqoka noma zesikhumba.
- Okuqukethwe kwalo mkhiqizo (ClO₂) kudla insimbi, sicela ugcine insimbi lapho uyisebenzisa.
- Ungayigcini ngaphansi kwezinga lokushisa okuphezulu noma ngokukhanya kwelanga ngqo.
- Uma uyisebenzisa ngaphandle noma endaweni enokusakazwa komoya okuhle, umphumela olindelekile kungenzeka ungatholakali.
Langaphambilini I-Chlorine Dioxide Air Sanitizer
Olandelayo: I-NBR Latex
Ama-Deodorizer Bag Air Fresheners